आज साउन ७ गते बिहिबार, कस्तो छ तपाईंको दिन ? - kageshworikhabar.com
आज साउन ७ गते बिहिबार, कस्तो छ तपाईंको दिन ?
आज मिति वि. सं. २०७८ साल श्रावण ७ गते। बिहिबार। तपाईंको आजको राशिफल
दिन फलदायी रहेको छ । अस्वस्थ तथा तनाव महसुस गर्नु हुनेछ । थकान त अशान्तिको अनुभव गर्नुहुनेछ। रिसको कारण काम बिग्रन सक्छ। व्यवहारमा संयमता राख्नुहोला । तोकेको समयमा काम पुरा गर्ने प्रयास गर्नु होला। धार्मिक यात्रा हुन सक्छ। काम बिग्रने सम्भावना हुँदा कुनै पनि नयाँ कार्यको थालनी नगर्नु होला ।
कुनै पनि नयाँ कार्यको थालनी नगर्नुहोला। स्वास्थ्य बिग्रन सक्छ । त्यसैले खान पानमा बिशेष ध्यान दिनुहोला । शारीरिक तथा मानसिक रुपमा थकान अनुभव गर्नु हुनेछ । कार्यालयमा कामको भार बढ्ने हुँदा थकान अनुभव हुनेछ। यात्राको लागि समय राम्रो रहेको छैन।
शुख खुशीमा दिन बित्नेछ । बिपरित लिंगीसँग भेट हुनेछ। साथी भाइसँग रमाइलो यात्रा हुनेछ। वाहन शुख मिल्नेछ । नयाँ वस्त्र प्राप्त हुनेछ । भोजनमा मिठो खान पाइनेछ । स्वस्थ र फुर्तिलो हुनुहुने छ । उत्तम दाम्पत्य जीवनको शुख प्राप्त हुनेछ ।
दिन राम्रो बित्नेछ । घरमा रमाइलो वातावरण हुनेछ। घरमा परिवारका सदस्यमा खुशी छाउने छ। नोकरीमा लाभ हुनेछ। नजिकको सहकर्मीबाट लाभ हुनेछ। स्त्री मित्र संगको भेटले मन प्रशन्न हुनेछ। शत्रुसँग विजय प्राप्त हुनेछ।
दिन रमाइलोमा बित्नेछ। प्रेमीसँग भएको भेट लाभ दाएक हुनेछ। मन प्रशन्न हुनेछ। शन्तान प्राप्तिको योग बनेको छ। बिद्यार्थीको लागि राम्रो समय रहेको छ । स्त्रीमित्रबाट लाभ हुनेछ। परोपकारी कार्यमा सहभागी हुने अवसर मिल्ने छ ।
शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य राम्रो हुनेछ । केहि समस्याको कारण चिन्ता बढ्न सक्छ। आफन्तसँग खट-पट हुनसक्छ। आमाको स्वास्थ्यको चिन्ता हुन सक्छ । अचल सम्पति तथा व्यवसायमा बिशेष ध्यान दिनुहोला। स्त्री तथा पत्नीबाट हानी हुनसक्छ।
दिन शुभ हुनेछ। साथि भाइसंगको सम्बन्ध राम्रो हुनेछ। अचल सम्पतिको चर्चा बढ्नेछ । धार्मिक यात्रा हुनेछ । धन लाभ हुनेछ । व्यापारको लागि यात्रा हुनसक्छ। नायाँ कामको थालनीको लागि उचित समय रहेकोछ । भाग्य वृद्धि हुने योग बनेकोछ। शरीरिक तथा मानसिक रुपमा स्वस्थ हुनुहुनेछ।
दिन सामान्य फलादाही रहेको छ । व्यर्थको खर्च हुनसक्छ। घर परिवारमा झगडा हुनसक्छ। आफन्तमा खट-पट हुनसक्छ। शारीरिक समस्या हुनाले मनमा चिन्ता बढ्न सक्छ । बिद्यार्थीको लागि बिभिन्न समस्या हुनसक्छ।
धार्मिक यात्रा हुनसक्छ। गरेको कार्य सम्पन्न हुनेछ । शारीरिक तथा मानसिक रुपमा स्वस्थ हुनुहुनेछ । जसको कारण मनमा खुशी छाउनेछ। घरमा मांगलिक कार्य हुनेछ । आफन्तसँग भेट हुनेछ। मन प्रशन्न हुनेछ । समाजमा मन प्रतिष्ठा बढ्नेछ।
दिन अत्यन्तै फलदाइ रहेको छ। कार्यमा सफलता प्राप्त हुनेछ । व्यापारीहरुको लागि व्यापार वृद्धिको समय रहेको छ । बाबु तथा आफूभन्दा ठुला बाट लाभ हुनेछ। मान सम्मान तथा पदउन्नतिको समय रहेको छ।
Previous articleजमुनहा नाकामा स्थायी हेल्थ डेस्क सञ्चालन
Next articleदेशभर बदली र वर्षा, यी प्रदेशमा भारी बर्षाको सम्भावना